DOWRKA JAMCIYADDA QURUUMAHA MIDOOBAY WAA SIDEE
DOWRKA JAMCIYADDA QURUUMAHA MIDOOBAY WAA SIDEE?!
Si loo ogaado guusha ama guuldarrada urur la soo gudboonaata, waxaa lagama maarmaan ah in dib loo jalleeco ujeeddooyinkii markii horeba loo yagleelay ururkaas�
Jamciyadda Quruumaha Midoobay waxaa la asaasay sannadkii 1945tii, ka dib markii uu dhammaaday dagaalkii ay reer galbeedku dagaallameen balse markii danbe qolyaha magac bixinta ku xeel dheeri ay caalammiyeeyeen! Sababaha ama ujeeddooyinkii loo aasaasay waxaa lagu soo uruuriyaa in laga hortago dhibaato iyo gacan ka hadal danbe oo ka dhex dhaca dadyawga caalamka ka dib markii la soo dhadhamiyay khasaarooyin fara badan oo dagaalladu sababeen.
Qodobbada aasaaska u ah ururka QM waxaa lagu qeexay:
Dhowrista nabadda iyo xasilloonida caalamka.
Ilaalinta shuruucda iyo qawaaniinta caalamiga ah.
Hirgalinta heshiisyada iyo axdiyada dhexmara waddamada xubnaha ka ah.
Iskaashiga iyo wada shaqeynta xubnaha QM dhinacyada xallinta khilaafaadyada, dhibaatooyinka bulshadeed iyo kobcinta dhaqaalaha.
Difaaca xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah iyo dhowrista xornimada dadyawga dunida ku dhaqan.
Inkastoo ay sidaas u qurxoon yihiin qodobbada Charterka QM isla markaana laga filayay in ururkani uu noqdo mid u dhexeeya waddammada iyo dadyawga caalamka ku dhaqan danahoodana si siman ugu adeega; hadana QM waxay ku guuldarraysatay in ay xitaa dhaqan galiso qodobka ugu horreeya dastuurkeeda iyo ujeeddadii 1aad ee loo aasaasay, taasoo ah: Dhowrista Nabadda iyo Xasilloonida Caalamka.
Sababtuna waxay tahay go�aan gaarayaasha rasmiga ah ee QM oo iyagu mar kasta qasa si xunna u isticmaala dastuurka ururka mar kasta oo dantoodu sidaas ku jirto! Tusaale ahaan: qodobbada 41aad iyo 42aad ee Cutubka 7aad ee dastuurka QM wuxuu si cad u qeexayaa: In ciqaab xanuun badan la mariyo xubin kasta oo ku xadgudubta nabadda iyo xasilloonida xubnaha kale ama ku duusha waddan xor ah!
Sida sharcigu qabo dhammaan xubnaha QM waxaa ku waajib ah inay ixtiraamaan oo dhowraan dastuurka QM. Si kastaba shuruucda QM waxaa ka saa�id caleeyay sidii loogu dabbakhi lahaa danaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee waddammada ugu tunka roon caalamka maanta, kuwaasoo la baxay laqabka ah (Superpowers).
Arrimahaas waxaan si cad uga dheehan karnaa dhacdooyinkan soo socda:
Markii ay Ciraaq ku duushay Kuweyt sanadkii 1991kii, qodobbadii canbaaraynayay falkaas ee dastuurka QM si fiican baa loo hirgaliyay waana laga hortagay isla markaana Kuweyt laga xoreeyay Saddaam. Balse markii uu Maraykanku ku duulay Afqaanistaan iyo Ciraaq isla qodobkii dasturka u ahaa QM lama soo hadalqaadin!.
Sidaas si la mid ah markii dowladda Itoobiya ay horraantii sannadkan ku duushay isla markaana qabsatay dalka Soomaaliya kuna xadgudubtay xuduudihii xorta ahaa ee Soomaaliya waxba lagama soo qaadin arrintaas waana la iska illoobay in Charterka QM uu ku jiray qodob diidaya in dil, qas iyo qalalaase laga rido dal xor ah isla markaana meel looga dhaco xuduudaha, sharafta iyo xornimada waddammada xubnaha ka ah QM.
Laga soo bilaabo aasaaskii QM, xaalku waligiiba wuxuu iska ahaa (LA JIIFIYAANA BANNAAN!), waxaana iska jirtay aragti shilinka labadiisa waji oo kale leh (Double Standard) oo ay gadaal ka riixayaan dowladaha majaraha u haya maamulka QM. Hhase yeeshee laba daraadle laga soo bilaabo qabsashadii Falastiin, dagaalkii Korea ilaa burburintii Afqaanistaan, Ciraaq iyo Soomaliya sidii arrinta loo maamulay waxay aheyd mid wax lagu masaalo aanay jirin!!!
Dhinaca kale, marka aad u fiirsato qaabdhismeedka golayaasha QM, habka codeynta, lahaanshaha awoodda gaarka ah ee waddammada qaar leeyihiin (Codka Diidmada Qayaxan) iyo ku tasarrufidda sida howluhu u socdaan waxaad arkaysaa in arrintuba aysan aheyn mid lagu daryeelayo xuquuq bini�aadam ama xaq-soor ka dhex dhaca dadyowga caalamka si caddaaladda waafaqsan ee xaalku yahay kii ay habar-dugaag ku qaybsatay hilibkii hasha!
Si kale haddii aan hadalka u dhigo ururka QM maanka, mabda�a iyo maalka lagu aasaasay waxaa iska leh cidda hoggaanka u haysa waxaana nacasnimo ah in lagaba fisho inuu u daneeyo cid uu mabda� ahaanba col la yahay!
Arrinta kale ee dhibka sii siyaadisay ayaa ah in saamiga ugu badan ee kharashka ku baxa ururka QM ay dawladda Maraykanku bixiso, taasina waa sababta keentay in go�aan kasta oo QM soo saarto uu Maraykanku dardaro isla markaana la waayo ahmiyad QM ay u leedahay dadyowga caalamka, lana kala garan waayo UN iyo US, waana halkii uu ka yiri abwaankii Soomaaliyeed oo arrintaas aad ula yaabay: (QARAMADII MIDOOBAYOOW QALIN MARAYKAN MAAD TIHIIN??!!). Balse abwaanku waxaad mooddaa inuuba isagu jawaabta cid walba ka garanayay markii uu isugu jawaabay isagoo ku hadlaya lisaanu xaalka caalamka miskiinka ah: (MAHAANBA LOOGA MAARMINOO, MASRUUFKA MAAMULKUU BAXSHAA!!!).
Jamciyadda Quruumaha ka dhaxeysa waxay wayday ahmiyaddii ay u lahayd dadyowga caalamka mana haysato xornimo ay howlaheeda ku gudan karto ama ay ku xallin karto dhibaatooyin badan oo caalamka maanta ka taagan. Tusaalayaasha arrintaas ku tusayana waxaa ka mid ah:
Qaraarkii tirsigiisu ahaa 1559 ee golaha ammaanka ee QM ku gaareen sanadkii 2004kii in Siiriya ay ciidammadeeda kala baxdo xuduudaha Lubnaan isla markaana ay ixtiraamto madax-bannaanida dalka Lubnaan. Haddaba su�aasha is weydiinta leh ayaa ah sababta tallaabo taas la mid ah looga qaadi waayay arinka dalka Soomaaliya?!!! Sow tani ma aha daliil cad oo daaha ka rogaya ishaafalataysiga cidda iska leh go�aan qaadashada rasmiga ah ee ururka QM?
Xilligii ay ciidammada Itoobiya oo si xad dhaaf ah ugu hubaysan kaarayaal (taangiyo) iyo dabbaabaadka noocyadiisa kala duwan ay saldhigyo ka samaysteen qaybo badan oo dhulka Soomaalida ah, ayna hubeeyeen dagaal oogayaashii, isla markaana gummaadeen, argagax iyo dhibaatana u gaysteen shacabka Soomaaliyeed, QM waxay dooratay inay ka aamusto arrinta Soomaaliya.
Kaba sii darane QM uma sixin ciidammadii soo duulay ficilkoodii oo qura balse wuxuu ku sii kaalmeeyay inuu u galiyo shaati uu ku cammaynayo caalamka miskiinka ah markii uu ku magacaabay inay yihiin ciidammo nabad ilaalin ah! (dabcan magacaasu waa sax marka dib loo eego nabaddii mucjisada aheyd ee ka jirtay koonfurta Soomaaliya xilligii ay itoobiyaanku galeen taasoo ciidamadaas loo geeyay halkaas inay nabaddaas Soomaalida ka ilaaliyaan!) isagoo isla markaana eed iyo canbaareyn dusha uga tuuray waddammadii mucaaraday qabsashada Soomaaliya kuna eedeeyay in ay hub iyo kaalmo siiyaan kooxaha wax iska caabbinta ka wada gudaha Soomaaliya.
Ugu danbeyntii; sababta ugu weyn ee keentay qalalaasaha ka jira guud ahaan caalamka, gaar ahaanna geeska Afrika waa caddaalad darrada iyo jirjirroolanimada ay ku dhaqmayaan quwadaha hogaanka u haya ururka QM, waayo haddii uu ururkani dhab ahaan ugu adeegi lahaa si siman danaha dadyowga caalamka ku dhaqan, ma uusan canbaareeyeen waddammada ku doodaya in la fuliyo wixii heshiiska lagu ahaa laguna dhaqmo axdiyadii iyo shuruucdii la dhigtay balse wuxuu cod dheer ugu dhawaaqi lahaa in: (dowladda Itoobiya ee ku duushay Soomaaliya ay ciidammadeeda si degdeg ah ugala baxdo xuduudaha Soomaaliya), runtiina tani waxay dhici kartaa oo qura haddii QM iyo Maraykanku aanay isku hal shey aheyn!!!
By: Firdowsa C/qaadir Cabdi